Colaad dhax martay Beello wada daga Miyiga Gobolka Mudug oo lasoo Afjaray – Radio Muqdisho
Wax garadka iyo Salaaddiinta Gobolka Mudug ayaa ku guuleystay in ay xal ka gaaraan colaado ku saleysan aanooyin Qabiil oo kusoo laalaabtay degaanno ka tirsan Gobolka Mudug.
Suldaan; Cabdi Naasir Jama Seed, oo kamid ah cuqaasha arrimahaasi ku howlan ayaa SONNA u sheegay in ay soo Afjareen colaadihii sida joogtada ah uga dhici jiray Dhulka Miyiga ah.
C/naasir Jaamac Seed, ayaa sheegay in ay soo laabteen noloshii iyo isu socodkii Dadka, lagana guuleysan doono kooxo uu sheegay in xilliyada qaar ay dhibaato ka dhex sameeyaan Xoolo dhaqatada halkaasi degta.
Dad ka badan Boqolaal ayuu Suldaanku sheegay in ay ku dhiman jireen Sanad walba coladaha reer guuraaga Gobolka Mudug ku dhexmara Dhulka Miyiga ah, halka Xoolo Kumanaan gaarayana lagu kala dhici jiray
Colaadaha ku salaysan aanooyinka Qabiilka ee ka dhaca Dhulka Miyiga ah ee Gobolka Mudug ayaa sababay in ay ku ceyrtoobaan Qoysas badan oo reer guuraa ah, halka ay ku naf waayeen Boqolaal Qof oo ku dhintay dagaalladii dhacay.
Dedaallo badan oo sameeyee madaxda Dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul Goboleedka Galmudug ayaa ayaa sababay in guulo badan laga gaaro xallinta colaad Beeleedyo halkaasi kusoo laalaabtay iyo dilalkii salka ku hayay aanooyinka.